အမျိုးသမီး - အသက် ၂၆ နှစ် - ငါပြောင်းလဲသွားတဲ့အမျိုးသမီးလိုခံစားရတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လိင်အတူတကွ ပို၍ သီးပွင့်လာပြီးချိတ်ဆက်လာသည်။ - သင့် ဦး နှောက် Porn တွင်
အမျိုးသမီး - အသက် ၂၆ နှစ် - ငါပြောင်းလဲသွားတဲ့အမျိုးသမီးလိုခံစားရတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လိင်အတူတကွ ပို၍ သီးပွင့်လာပြီးချိတ်ဆက်လာသည်။
ငါ 26 နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးဖြစ်၏။ ငါသည်ပျင်းရိတက်ကောက်ဖို့ porn အသုံးချနိုင်ခဲ့တဲ့တော်တော်ညျြးနှီးရေရှည်ဆက်ဆံရေးအတွက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဆက်ဆံရေးအဆုံးသတ်ပြီးနောက်ကျနော်ကျိန်းသေနေ့တိုင်းငါ့ porn အသုံးပြုမှုကိုတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ငါသည်ငါ့ယခုစေ့စပ်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးကျနော်တို့တော်တော်လေးမှန်မှန်လိင်ရှိသည်။
ငါလစုံတွဲတစ်တွဲများအတွက်အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သောအခါ, သို့သော်ငါတစ်နေ့လျှင်အကြိမ်ပေါင်းများစွာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခဲ့သည်။ သူအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာ၊ ငါဟာလိင်ဆက်ဆံတာမျိုး၊ လိင်မဆက်ဆံတာမျိုးမခံစားရဘူး။
ငါနောက်ကျောအလုပ်သို့သွားကြ၏သို့သော် porn ကိုအနည်းဆုံး 2-3x တစ်ရက် masturbating နှင့်စောင့်ကြည့်ခဲ့သည်။ ငါသူမရှိသလောက်မိမိလက်နှင့်ပါးစပ် (သူလူအပေါင်းတို့သည်အချိန်ရန်အသုံးပြု!) နှင့်ဘယ်တော့မှတတျနိုငျသနှင့်ငါ့ကိုပယ်ရဖို့နိုင်ခဲ့သည်သဘောပေါက်လာတယ်။
လေးပတ်ကြာမှတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာ၊ ညစ်ညမ်းတာ၊ တုန်ခါတာတွေမရှိခဲ့ဘူး၊ ငါဟာပြောင်းလဲသွားတဲ့အမျိုးသမီးလိုခံစားရတယ် !!! ကျွန်ုပ်တို့၏လိင်အတူတကွ ပို၍ သီးပွင့်လာပြီးချိတ်ဆက်လာသည်။ ငါ့ခေါင်းကနေတဆင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတွေမပြဘူး။ သူကကျွန်တော့်ကိုပါးစပ်ရောလက်နဲ့ပါအခုလိုလွယ်လွယ်ကူကူလွတ်မြောက်နိုင်ပြီ၊ သူဟာပိုပြီးပြီးပြည့်စုံတဲ့သူလို့ငါခံစားရတယ်။ ငါကသူ့ကိုလိုချင်တောင့်တသောရုပ်ပုံများကိုတပ်မက်နေသည်။ ငါတိုက်တွန်းအားပေးနေတုန်းပဲ။
LINK - ကျွန်မအမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်၏။ မနေ့ကအဘယ်သူမျှမညစ်ညမ်း / FAP ၏တစ်လဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာကွာခြားချက်အံ့သြဖွယ်ပါပဲ!